Cypress | November 2019
Editor Ee Doorashada November 20,2019
Ugu Weyn Ee Cypress
Cudurada iyo cayayaanka qoryaha, waxa la sameeyo haddii qoyaanka qoyaanka
Cypress waa "bedelka kaynta ee", taas oo kori karta labadaba qolka iyo goobta. Caruuska ka yimid geedkan yar wuxuu xasuusiyaa socodka hawada cusub ee kaymaha ah. Cypress - warshad alerji ah, wakiil ka ah cypress cypress. Waxay leedahay laba taajood: kobcinta iyo pyramidal.
Dhirta dhaadheer waxaa jira meel kasta oo naqshad dhuleed. Sanadka oo dhan ma luminayaan qurxinta, iyagoo ku faraxsan laamo cagaaran iyo caraf udgoon. Ka mid ah noocyada kala duwan ee noocyada iyo noocyo, ninkii beerta ka shaqeeyaa waxa uu raadinayaa wax gaar ah, gaar ah. Taasina waa neefta. In barxadda guryaha gaarka loo leeyahay, geedku wuxuu ku habboon yahay beeritaanka kali ah, qurxin beerta dhagax weyn oo abuuraya qaab qurux badan leh dhaqamada kale.
Dhirta muuqda: noocyada iyo magacyada
Nasiib daro dhammaan dadka wax dhaadheer ah ayaa ka soo baxa, taas oo ah sababta ay u jecelyihiin oo caan u ah farsamoyaqaanada. Dhirta iyo cirifka, barxadda iyo shubanka, oo leh cirbado iyo go'doomin - dhirtaas waxay qurxin doonaan beerta beerta, beerta ama meelaha banaanka ah. Maqaalkani, waxaad baran doontaa muhiinka iyo noocyada ay yihiin.
Noocyada dhirta sii kordhaysa (Rose duurjoogta ah) laalaabka, beeritaanka iyo daryeelka beerta
Ukraine ayaa bilaabay inay dhisto warshad tamarta qoraxda ah
Tilmaanta iyo sifooyinka beeritaanka loodhka (loodhiga caadiga ah)
Ma suurta gal ah in lagu quudiyo bakaylaha leh dhir
Haddii aad rabto in aad u koraan ma aha oo kaliya delicious, laakiin sidoo kale yaanyo aad u faa'iido leh, waxaad hubaal noqon doontaa xiiso leh kala duwan ee yaanyada "Fairy Gift", midhaha kaas oo lagu gartaa content sare ee beta-carotene. Tani ma aha sharafkeeda keliya. Muddooyinka Bisaylkiisa Hore, iska caabida cudurada badankooda iyo wax-soo-saarka wanaagsani waa dhamaan sifooyinka kala duwan. Read More
Gaaritaan habboon iyo daryeel ee alixuum
Imisa doofaar, lo'da, faras, miisaan culus: habab wax ku ool ah oo loo go'aamiyo iyada oo aan la helin miisaan
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cypress 2019